Trump oo iska fogeeyay guuldarrada Alabama | Gaaroodinet
Trump oo iska fogeeyay guuldarrada Alabama
December 14, 2017 - Written by Admin
USA(GRN) Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa iska fogeeyay Roy Moore ka dib markii ay guuldarro taariikhi ah ka soo wajahday gobolka Alabama oo si wayn u taageeri jiray xisbiga Jamhuuriga.
Guusha uu gaaray Doug Jones oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa soo yaraynaysa aqlabiyaddii Jamhuuriga ee aqalka Senate-ka iyadoo ay hadda labada xisbi kala yeelanayaan 51-49 kursi, arrintaas oo jahwareer u keensan karta sharciyada uu Trump rabo in uu meelmariyo.
Ol’olihii doorashada ee Moore waxaa hareeyay eedaymo ku saabsan in uu dumar badan si xun ula dhaqmay inkastoo uu diiday eedaymahaas.
Jones wuxuu noqonayaa qofkii u horreeyay ee xisbiga Jamhuuriga ka tirsan ee gobolka Alabama ku matala Senate-ka muddo 25 sano ah.
Inkastoo ay xubno sarsare oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ay diideen in ay taageeraan Moore iyadoo bartanka lagaga jiray eedaymo ku saabsan in uu caruur faroxumeeyay, haddana madaxweynaha Maraykanka ayaa si buuxda u taageeray.
Trump ayaa xataa Fariin taleefanka ugu duubay murashixii Jamhuuriga ee eedaymaha la’daalaa dhacayay maalmo uun ka hor intii aysan doorashadu dhicin.
Markiise ay soo baxday in laga guulaystay Twitterkii u horreeyay ee uu qoro wuxuu ugu hambalyeeyay Jones oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan guushuna ay raacday.
Laakiin wuu sii waday oo taageerayaashiisa wuxuu xasuusiyay in markii ay socotay doorashadii xisbiga Jamhuuriga dhexdiisa ahayd in uu isagu taageersanaa Luther Strange oo ahaa ninkii ay sida wayn isu hayeen Moore.